Tag: fandaozana | Martech Zone
Fomba fandrefesana, fisorohana ary fampihenana ny tahan'ny fandaozana ny sarety miantsena
Alakamisy Oktobra Oktobra 22, 2020 Alakamisy Oktobra Oktobra 22, 2020 Douglas Karr
Gaga foana aho rehefa tojo mpanjifa miaraka amin'ny fizotry ny fizahana an-tserasera ary firy amin'izy ireo no nanandrana nividy avy tamin'ny tranokalan'izy ireo! Ny iray amin'ireo mpanjifanay vaovao dia nanana tranokala iray izay nanambazany vola iray taonina ary dingana 5 ny miala amin'ny pejy fandraisana mankany amin'ny sarety fiantsenana. Fahagagana fa misy manao an'io hatreto! Inona ny fialana amin'ny fivarotana fiantsenana? Mety
Ahoana ny fomba famolavolana ny fampielezana mailaka fanafoanana ny lisitry ny sarety
Friday, May 6, 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Tsy isalasalana fa namolavola sy nanatanteraka hetsika fampielezana mailaka nandao ny sarety fiantsenana mahomby. Raha ny marina, maherin'ny 10% ny mailaka fandaozana ny sarety nosokafana, no kitihina. Ary ny salan'isan'ny vidin'ny fividianana amin'ny alàlan'ny mailaka fandaozana sarety dia 15% avo kokoa noho ny fividianana mahazatra. Tsy mahay mandanjalanja fikasana bebe kokoa noho ny mpitsidika ny tranokalanao manampy entana ao amin'ny kalesinao! Amin'ny maha mpivarotra azy dia tsy misy maharary fo noho ny mahita fidirana be any aloha
Inona ny atao hoe automatisation marketing? Ny zavatra tokony ho fantatrao…
Alahady 3 aprily 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Marketing automation dia buzzword izay toa ampiharina amin'ny zava-drehetra ankehitriny. Raha misy sehatra rindrambaiko afaka miteraka hafatra amin'ny mpandray amin'ny alalàn'ny API azy, dia asandratra ho mandeha ho azy ara-barotra izany. Raha ny hevitro, tsy marina fotsiny ity. Na dia mety ho hetsika mandeha ho azy mifanaraka amin'ny paikadin'ny varotra aza izy ity, dia tsy vahaolana amin'ny automatisation marketing izany. Raha ny marina dia mino aho fa ny ankamaroan'ny vahaolana amin'ny automatisation marketing misy - na ny lehibe indrindra aza - manana
20 Ireo singa lehibe manimba ny fitondran-tenan'ireo mpanjifa E-Varotra
Alahady 28 Febroary 2016 Asabotsy 27 Febroary 2016 Douglas Karr
Wow, ity dia sary manazava be dia be sy feno famolavolana avy any BargainFox. Miaraka amin'ny antontan'isa amin'ny lafiny rehetra amin'ny fitondran-tenan'ny mpanjifa an-tserasera, dia manome fanazavana momba izay tena misy fiantraikany amin'ny taham-panovana eo amin'ny tranonkalanao e-commerce. Ny lafiny rehetra amin'ny traikefa amin'ny e-varotra dia omena, ao anatin'izany ny famolavolana tranokala, horonan-tsary, fampiasana, hafainganana, fandoavam-bola, fiarovana, fandaozana, fiverenana, serivisy ho an'ny mpanjifa, chat mivantana, hevitra, fijoroana vavolombelona, ​​fandraisana anjaran'ny mpanjifa, finday, tapakila ary fihenam-bidy, fandefasana entana, programa tsy fivadihana, media sosialy, andraikitra ara-tsosialy ary fivarotana antsinjarany.
Ny andraikitry ny data amin'ny làlan'ny fividianana an-tserasera
Alakamisy, Jona 5, 2014 Douglas Karr
Misy teboka am-polony eo amin'ny làlana hividianana fivarotana izay ahafahan'ny mpivarotra manangona sy mampiasa angona mba hanatsarana ny traikefa fiantsenana ary hamadika ny mpizaha ho mpividy. Saingy be dia be ny angona angona ka mety ho lasa mora ny mifantoka amin'ireo zavatra tsy mety ary manalavitra ny lalana. Ohatra, ny 21% -n'ny mpanjifa dia mandao ny saretiny fotsiny satria tsy mahomby ny fizotry ny fizahana. Ny làlana mankany amin'ny fividianana dia manana isa am-polony izay azon'ny mpivarotra angonina